Fiakarana avo lenta avo lenta avo lenta Ringlcok Scaffolding diagonal Brace miaraka amin'ny mpamatsy SGS, ANSI, CE ary orinasa | Haingana
High Quality High Ringlcok Scaffold Diagona ...
SGS / ANSI / CE Ceritified High Quality Building Materia ...
ANSI / AS / SGS / CE voamarina Hot DIP nandrisika Ringlock ...
Fiakarana avo lenta avo lenta Ringlcok Scaffolding Diagonal Brace miaraka amin'ny SGS, ANSI, CE
Ringlcok avo lenta Allround Scaffolding Diagonal Brace, SGS, ANSI, CE CERTIFICATION, China Scaffolding
Fitsipika / Mitsangana Q345 Φ60orΦ48 * 3.2mm, Halavany: 0.2 / 0.35 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0m
Circle DIsc Q345BΦ133 * 10mm, misy lavaka 8 ao
Fahaiza-mitondra ∅60 dia afaka mahatratra 20T ∅48 afaka mahatratra 17T
Fotoana fanompoana 20 taona mahery
Delivery 20 andro aorian'ny fametrahana
Fanamarinana kalitaon'ny sifotra
Ny kalitao, ny fiarovana ary ny fahombiazan'ny vidiny dia ny fanoloran-tenanay. Mpiara-miasa am-pahatsorana amin'ireo mpanjifanay izahay, na inona na inona habeny. Manerana an'izao tontolo izao.
Sakan-tsambo haingana dia manana traikefa manan-karena sy fitaovana mandeha ho azy mandroso, izay afaka manome famokarana namboarina ho an'ny scaffoldy hamaly ny filàna samihafa.
Misolo tena ny fiarovana sy ny scaffold mahay isika amin'ny alàlan'ny tetikasanay amin'ny fananganana.
Mahatsapa ny kalitao amin'ny alàlan'ny vokatray. Manatsara azy ireo foana isika.
1. Iza isika?
Rapid Scaffolding dia orinasa iray an'ny Xishan No.3 Construction Industrial Co., Ltd (无锡 市 锡山 三 建 建 实业 有限公司). Ny orinasany dia manondro ny famolavolana scaffold & formwork, famokarana, fanofana ary fifanarahana.
2. Oviana no niorenan'ny Scaffolding Rapid?
3. Aiza no misy ny Scaffolding Rapid?
Rapid Scaffolding dia miorina ao Wuxi, izay misy toerana be izay 30 minitra miala an'i Shanghai amin'ny lamasinina ary adiny iray amin'ny fiara, ary 100km miala ny seranan'i Shanghai. Ny adiresy dia TSIA. 107 107 West Xigang Road, Distrikan'i Xishan, tanànan'i Wuxi, faritanin'i Jiangsu, Sina.
4.Mba firy ny toeram-pivarotana?
Mirefy 100 000 metatra toradroa ny velarany, ary 15000 metatra toradroa ny velaran'ny trano
5.Manana zo mahaleo tena manafatra sy manondrana ve ny Scaffolding Rapid?
6. Ohatrinona ny fahaizan'ny famokarana Rapid Scaffold isan-taona?
25,000T / taona
7. Ahoana ny fomba hifandraisana amin'ny Scaffolding haingana?
Azonao atao ny mandefa mailaka any amin'ny sales@rapid-scaffold.com na miantso + 86-510-83796833 mivantana.
8. Rahoviana aho no afaka mahazo ny teny nalaina taorian'ny fanadihadiana?
Ao anatin'ny 24 ora.
9.Inona ny ora fanaterana?
Amin'ny ankapobeny, 30-45 andro aorian'ny nahazoana ny vola mialoha.
10.Afaka manome santionany ve ny Scaffolding haingana?
Ie. Raha mahazatra ny santionany ary amin'ny habetsany dia maimaim-poana izany. Raha toa ka tsy fahita firy ny santionany ary amin'ny karazany isan-karazany dia hiampangana izy.
11.Inona ny rafitra fitantanana kalitao?
Sakan-tsambo haingana dia nandalo ny taratasy fanamarinana kalitao iraisam-pirenena ISO
12.Mamolavola famolavolana haingana ve ny fanaovana Scaffolding haingana?
Rapid Scaffolding dia mirehareha amin'ny fanolorana ekipa manam-pahaizana momba ny injeniera sy manam-pahaizana mahay ary mahay. Izy ireo dia afaka mamolavola sy manamboatra vokatra vaovao mifanaraka amin'ny fangatahanao.
13.Inona ny fitsaboana any an-tampon'ny scaffold?
HDG, EP, PC ary nolokoina.
14.Inona ny tahan'ny Zinc?
8% amin'ny plank, 6% an'ny fantsona 3.0-4.0mm, 7% an'ny 2.3-3.0mm.
15. Ahoana no hitahiry ny scaffolding?
Ho an'ny scaffolding izay vita farany dia EP, PC ary nolokoina, dia asaina mitahiry amin'ny efitrano misy rivotra sy maina. Ho an'ny scaffolding izay famaranana dia HDG, tsy misy fepetra manokana.
16.Mandra-pahoviana ny androm-piainan'ny vokatrao?
Ny androm-piainan'ny vokatra mafana voafafa mafana dia manodidina ny 10 ka hatramin'ny 15 taona, miankina amin'ny toe-javatra manokana.
17.Inona no tsy itovizany amin'ny rafitra Ringlock sy Octagonlock?
Volavola: kapila peratra sy kapila Octagon.2) Fitaovana: Tsindry ny peratra peratra, raha kapila kosa ny Octagon no foronina. 3) Vodin-tseranana: voan'ny tsindry Ringlock mandritra ny sandan'ny Octagonlock. 4) Spigot: Ringlock dia mampiasa spigot raha Octagonlock kosa mampiasa collar 5) Ringlock dia mampiasa collar base raha tsy i Octagonlock kosa
Teo aloha: SGS / ANSI / CE Ceritified High Quality Building Material / Ny Atitany haingam-pandeha haingam-baravarana tohatra tohatra ho an'ny amidy
Manaraka: Wedge Clamp Coupler HDG Galvanizing ho an'ny Ringlock Scaffolding, Scaffolding Accessories,
scaffolding indroa clamp
scaffolding roa sosona
lisitra faritra scaffolding
scaffolding sodina mpampitohy
scaffolding sodina pin
fahaiza-mitondra fantsona scaffolding
scaffolding habe fantsona
milina fantsom-boalavo scaffolding
hazo fisaka scaffold
scaffolding birao mandeha galvanized
fatotra rindrina scaffold
scafolding faritra scaffolding
ANSI Ringlock Coupler Scaffolding Hot Galvanize ...
ANSI / AS / SGS / CE voamarina Hot DIP nandrisika nandrisika ...
ANSI / Asnzs / CE voamarina Hot DIP / HDG nandrisika ...